WARBIXIN: Shan Sababood Oo Mohamed Salah Ku Riixaysa In Uu Iska Diido Kooxaha Doonaya Kuna Sii Negaado Liverpool – Wararka Ciyaaraha Maanta
May 20, 2019 kooxda Premier League, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixino 4
Xiddiga kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa ku guulaystay gool dhalinta horyaalka premier League xilli ciyaareedkii 2-aad oo xiriir ah isaga oo muujiyay in uuna ahayn xiddig xilli ciyaareed kaliya ah sida ay dad badan ku sheegayeen bilowgii xilli ciyaareedkan.
Waxa run ah in qaab ciyaareedka Mohamed Salah hoos u dhacay xilli ciyaareedkan laakiin waxa uu ku guulaystay in uu difaacdo gool dhalinta horyaalka premier League xilli ciyaareedkan.
Waxa iska caadi ah in uu Mohamed Salah soo jiito indhaha kooxaha ugu waaweyn yurub kadib qaab ciyaareed cajiib ah oo uu soo bandhigay tan ilaa markii uu ku biiray Reds.
Laakiin waxa aan warbixintan ku soo bandhigaynaa 5 sababood oo Mohamed Salah ku riixaysa in uu sii joogo Liverpool iskan diido kooxaha doonaya adeegiisa.
1.Waxa aan qarsoonayn dhanka qalbi jileeca carabta, marka si aad ah logu jecelyahay oo ay ku jecelyihiin tababarahaaga, xiddigaha aad isku kooxda tihiin, taageerayaasha kooxda iyo waliba dadka dagan magaalada waxa ay Mohamed Salah ku riixaysaa in uu soo bandhigo waxa ugu fiican waliba ka hor istaagto in uu isaga tago Liverpool.
2.Guulaysiga Mashruuca Jurgen Klopp ayaa ah sababta ugu weyn ee Mohamed Salah ku riixaysa in uu sii joogo kooxda Liverpool, tababare Klopp ayaa Reds geeyay 4 final tan 3-dii sano ee ugu dambaysay iyada oo ay ka mid yihiin 3 final oo tartamada yurub ah iyo 2 final oo xiriir ah oo champions League ah waxana ay arintaas Salah ka dhigaysaa in uu ka fikiro in ay wax weyn ka soo socdaan kooxda uu Jurgen Klopp hogaamiyo mustaqbalka dhaw.
3.Mohamed Salah ayaa si cad oo muran la,aan ka ah xiddiga 1-aad ee kooxda Liverpool waxana ay dadka oo dhan ka war qabaan in salah yahay hogaamiyaha 1-aad ee kooxda iyada oo ay taageerayaasha kooxdu ku heesto magaciisa xitaa hadii uu gool iska khasaariyo.
Laakiin arintaas ayaanu hubin hadii uu ku biiro kooxaha ay ka mid yihiin Real Madrid, Barcelona, PSG Iyo waliba Juventus kuwaas oo uu ka noqon doono xiddig iska caadi ah sida xiddigaha kale ee kooxda.
4.Taageerayaasha Liverpool oo aan doonayn in ay kooxda Liverpool iska fasxdo xiddiga wax walba oo dhan marka loo eego in uu yahay xiddig ay si weyn u jecelyihiin waliba doonayaan in uu halyeey ka noqdo kooxdooda.
5.Fashilkia Philippe Coutinho oo uu maskaxda ku hayo marka loo eego in uu Coutinho ahaa xiddiga 1-aad ee Liverpool laakiin haatan laga war qabo waxa ku dhacaya tan ilaa markii uu ka tagay kooxda Liverpool isaga oo la kulmay dhaleecayn xoogan mar walba oo uu qaab ciyaareed xun soo bandhigo xilli ciyaareedkan.
Laakiin Jacaylka ay u qabaan Taageerayaasha Reds Mohamed Salah ayaan la kulmin wax dhaleecayn ah iyada oo ay taageerayaashu wali magaciisa ku heesayeen 9-kii kulan ee uuna wax gool ah dhalin xilli ciyaareedkii dhamaaday.
saalah was nudanyahay in u jogo liverpool
Mustqblka salah wuxu ku xiranyhy fnly champions league hdi ay reds qaado wa hubal wu si jogaya hdi ay ku guldresato wa xaqiq wuxu ka fkiri dona dalabyada so garaya wana bxaya dhaman xdagaha muhimka ah e reds mustqblkoda wa ciyrta fanly e champions league
Maxamed salax meshan ayaa laga jclyhy wuuna jogi dona balan dhorka sanadkn araga ayaa leg
waaa jeclahay mo damaged
Xulka Ivory Cost Oo Guul Ay U Qalmeen Ka Gaadhay Xulka South Africa